ဥရောပ | MoeMaKa Burmese News & Media
ကိုအောင်မှိုင်း – ထာဝရရဲ့ အခြားတဘက်မှ သူရဲကောင်းသို့
ကိုအောင်မှိုင်း – ထာဝရရဲ့ အခြားတဘက်မှ သူရဲကောင်းသို့ (မိုးမခ) သြဂုတ် ၁၇၊ ၂၀၁၈ မီးမီးဆိုတာ … ငါတို့ရဲ့ သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်။ မီးမီးပေါင်းများစွာကို ကိုယ်စားပြုသူလဲဖြစ်တယ်။ အနှစ်၃၀ဆိုတဲ့ တော်လှန်ရေးခရီးတလျှောက် ဆံတချည်မ...
ကိုအောင်မှိုင်း – ၈၈၈၈ တမ်းချင်း (မိုးမခ) သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၈ကနေ့ အဓိကပြဿနာက စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြား လွန်ဆွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဘက်က ရပ်လိုက်တဲ့အခါ လူထုဆန္ဒမဲ ၈၀%ကျော်နဲ့ အနိုင်ရပါတယ် ဆိုတဲ့ပါတီကြီးမှာ ရီရမလို...
ကိုအောင်မှိုင်း – ဇွန် ၆ စိတ်ဓါတ် (မိုးမခ) ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၈ အဖေက နံရံကိုခေါင်းနဲ့တိုက်တာလားတဲ့။ အမေက သားဒုက္ခရောက်မယ်တဲ့။ ဒီနံရံတွေကို ကျနော်တို့ခေါင်းတွေနဲ့ တိုက်ကြပါမယ် အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ တိုက်ကြပါမယ် နာနာကျဉ်းကျဉ်း...
ကိုအောင်မှိုင်း – ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား – အပိုင်း ( ၂ )
ကိုအောင်မှိုင်း – ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် မြန်မာ့တပ်မတော်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား – အပိုင်း ( ၂ ) (မိုးမခ) မေ ၃၁၊ ၂၀၁၈ ၁၉၆၂ခုနှစ်မတ်လ (၂)ရက်မှာတော့ ဗိုလ်နေ၀င်းဦးစီးပြီး စစ်တပ်က ပြောင်ပြောင်းတင်းတင်းဘဲ အာဏာသိမ်းခဲ့တော့တာ...
Daw Aung San Suu Kyi with military officials at the swearing-in of President U Htin Kyaw, 30 March 2016...
ကိုအောင်မှိုင်း – မင်း၏ – သစ္စ – ဘာသန (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၈ ငါဆိုတာ ကောင်းကင်မှာမွေးဖွါး ဘုရားသခင်က ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ လိမ်တာ တကယ်မဟုတ်ဘူး။ ငါဆိုတာ တုနိုင်းစရာမရှိ...
မောင်ရင်ငတေ ● ပင်လယ်မရှိတဲ့ မြေကမ္ဘာသို့ စာစု (ပိုလန်နယ်စပ်သို့ တညအိပ် – အပိုင်း ၂)
မောင်ရင်ငတေ ● ပင်လယ်မရှိတဲ့ မြေကမ္ဘာသို့ စာစု (ပိုလန်နယ်စပ်သို့ တညအိပ် – အပိုင်း ၂) (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၉၊ ၂၀၁၈ ပိုလန်နယ်သို့ အဝင်ဝ (ဓါတ်ပုံ မရငတ) Polska...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး ● ကပ်ပါးကောင်နဲ့ ချပ်ပြားမောင် (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၅၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်ရင်ငတေ ● ပင်လယ်မရှိသောမြေသို့ စာစု ပိုလန်နယ်စပ်သို့ တညအိပ် – အပိုင်း (၁) (မိုးမခ) ဇန်နဝါရီ ၃၊ ၂၀၁၈ ပိုလန်နယ်သို့ အဝင်ဝ (ဓါတ်ပုံ မရငတ) ပိုလန်မြေသို့ရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း...
ညိုထက်ညို – မြေကြီး နှင့် လူ
မြေကြီး နှင့် လူ ညိုထက်ညို (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၇ အဲဒီနေ့ မနက် ငါးနာရီလောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ကားလေး မန္တလေးရဲ့နှုတ်ခမ်းစပ်က ပလိပ်မြို့ကိုရောက်တယ်…. မြန်မာပြည်ရဲ့နေ့တာအရှည်ဆုံး ဇွန်လစခဲ့ပြီမို့ ပလိပ်မြို့ကလေးရဲ့ မနက်ငါးနာရီဟာ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ဗိုလ်နေမြဲ နင်းပြားနေမြဲ
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး – ဗိုလ်နေမြဲ နင်းပြားနေမြဲ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၇ No tags for this post. Related posts No related...
မောင်ရင်ငတေ ● ပင်လယ်မရှိသောမြေသို့ စာစု (၃) ဝမ်းယူရိုတန် နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၇ ဝမ်းယူရိုတန် နိုင်ငံရပ်ခြားခရီး Bratislava-Vienna = 1 Euro (ဓါတ်ပုံ...
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး ● အဆုံး အရှုံး (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၄၊ ၂၀၁၇ Tags: ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး Related posts No related posts.
မောင်ရင်ငတေ ● ဘလက်ဖောရက်စ်ကို ဖြတ်ကျော်ခြင်း၊ ဒွိုက်ခ်ျလန်း (သို့မဟုတ်) ဂျာမဏီ ဘလက်ဖောရက်စ်ကို ဖြတ် ကျော်ခြင်း (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၇ Schwarzwald (Deutschland) (Photo UMarcus)...
မောင်ရင်ငတေ ● ကာရံထားသော တံတိုင်းကြီးများမှသည် ခြံစည်းရိုးကို ခွကျော်သူများ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၅၊ ၂၀၁၇ ဘာလင်ခြံစည်းရိုးရောက် မရငတ Berliner Mauer (18092010) (Photo BThang) နာမည်ကျော် Berliner...
မောင်ရင်ငတေ ● ပြင်သစ်အရှေ့ဖျားက “ဆွစ်-ဂျာမန်” တို့ဆုံရာမြေ ဘာဇယ်မြို့မှ ကူးတို့လှေလေးတစင်းအကြောင်း (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၇ Bâle ဘားလ် သို့မဟုတ် Basel ဘာဇယ် (ပါးဇယ်) အထက်ရိုင်းမြစ်ကမ်းပေါ်ကမြို့ (ဓါတ်ပုံ...
မောင်ရင်ငတေ ● အမ်ဝမ်း အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်က အဝါရောင် ရေဂျီယိုဂျက် (ပင်လယ်မရှိသောမြေသို့ စာစုများ) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၁၅၊ ၂၀၁၇ ကားကြီးဂိတ်ဝင်းထဲ တပတ်ပတ်ရှာမေး၊ သူတို့ လမ်းညွှန်ချက်အရ လမ်းတဘက်ကိုကူး လိုက်ပို့လေ...